Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Ciidanka Wayaanaha oo Dad Kuqarxiyay Magaalada Jimma.
Deg Deg: Ciidanka Wayaanaha oo Dad Kuqarxiyay Magaalada Jimma.
Posted by Dulmane	/ August 25, 2017
War dag dag ah oo hada naga soo gaadhaya magaalada Jimma ee Gobolka Oromia ayaa sheegaya in qarax wayn laga maqlay suuqa laga dukaamaysto ee magaalada Jimma ee dhulka Oromia.
Sida xogta aan kuhelayno qaraxa ayaa lala eegtay goob kamid ah meelaha ugu mashquulka badan ee dadka shacabka ah ee ka adeegtaan, waxaana lasheegayaa in qaraxa lagu soo aadiyay xili uu suuqa kajiray mashquul badan oo dadka iyo baabuurtu ay is cidhiidhyeen.
Qaraxan oo loo adeegsaday bamka gacanta laga tuuro ayaa lasheegayaa in uu dhaawacay dad aad ubadan oo shacab ah, waxaana isbitaalka magaalada Jima lasoo gaadhsiiyay 16 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba.
Qaraxan ayaa loomalaynayaa in ay tuureen ciidamada sirdoonka ee wayaanaha, wuxuuna qaraxanu u egyahay midkamid ah dhaqanadii looga bartay ciidamada wayaanaha, waxayna shacabku siwayn isula dhex marayaan in ay ciidanka sirdoonku tuureen.
Dadka dhaqanka wayaanaha yaqaana ayaa sheegaya in ay ciidanka gumaysigu doonayaan dad badan oo ay xidh xidhaan si ay wado ugu helaan dadka shacabka ah ee awalba iska dhibanaa, ciidanka gumaysiga ayaa lasheegayaa in ay durba goobta uu qaraxu kadhacay kabilaabeen howlgalo shacabka kadhan ah waxaana lafilayaa in ay dad badan qaqabteen.
Dhinaca kale dadka kacdoon wadayaasha ah iyo jabhadaha hubaysan ayaa iska fogeeyay falkan shacabka lagu laayay, waxayna kacdoon wadayaashu sheegeen in haday iyaga yihiin ay qaraxa la eegan lahaayeen xafiisyada dowlada iyo xeryaha ciidamada.
Ciidanka wayaanaha ayaa kal hore qarax kuxidhay masjidka Anwar ee magaalada Addis Ababa waxaana qaraxaas kudhintay dad badan oo shacab ah, sidoo kale ciidanka wayaanaha ayaa qarixii ay iyagu dhigeen ee masaajidka Anwar ku eedeeyay dadka kacdoon wadayaasha ah si ay muslimka iyo dadka aan muslimka ahayn isaga horkeenaan.